နောက်ထပ်ဥပမာအကြံပြုချက်များလိုအပ်ပါသလား? – New Moon Graphic
©Nayoung Wooh 2017
©Nayoung Wooh 2009
ကျွန်မတကယ်ရှည်လျားကာသရုပ်ဖော်ဖြစ်ငါကွဲပြားခြားနားသောအလုပ်လုပ်နေတက်အဆုံးသတ်လျှင်ပင်အဖြစ် ယခုကျွန်မတခြားလူရဲ့အနုပညာလက်ရာများမှာကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်မလုပ်နိုင်သလောက်အတွေးအခေါ်များနှင့်အတူတက်လာဖို့ကြိုးစားနေပါ၏။
ကျွန်မအများကြီးမြူးမှတဆင့်ကြည့်ရှုသည်အတိုင်း, ကျွန်မပိုကောင်းတဲ့ “Obsidian” အဖြစ်လူသိများ “Nayoung Wooh” ၏အမည်အားဖြင့်ဝင်သူကိုဒီကိုရီးယားသရုပ်ဖော်အနှံ့သို့ရောက်ကြ၏။
သူမသည်ကိုရီးယားယဉ်ကျေးမှု၏ပုံစံ၌ဤ “အလှအပနှင့်သားရဲ” တို့ပါဝင်သည်ထားတဲ့အလှဆုံး “ဒစ္စနေး” မှုတ်သွင်းအနုပညာလက်ရာများအချို့ကိုဖန်တီးပေးခဲ့သည်။သူမ အများချစ်မြတ်ိနုးသော ယဉ်ကျေးမှုဂန္ထဝင်ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်များထဲကတစ်ခုကို ပြန်လည် ဖန်တီးသည် မှာ အံ့သြဖွယ်ပါပဲ။ ကျွန်မတကယ်အရောင်ကလာသောသူမ၏ပုံဥပမာကိုစတိုင်အထူးသဖြင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်နွေးထွေးမှုကို ချစ်မြတ်နိုးပါတယ်။ သူမ၏အကျင့်ကိုကျင့်နောက်ကွယ်မှ “အီဂျစ် Papyrus” နောက်ခံသူတို့ကိုသုံး, (3D) ရှုထောင်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောနှင့်ပိုပြီးခေတ်မီဒစ်ဂျစ်တယ်အနုပညာ ထက်ရာစုနှစ်များစွာအရွယ်ပန်းချီကားနဲ့တူပိုပြီးထင်ရှားပေါ်ထွန်းစေပါသည်။
© 2017 – Delightful Myanmar Company Limited
ထို့ကြောင့်ကျွန်မတကယ်စိတ်ကူးတယ်တကယ်တွေးမိ: ကျွန်မတို့ရဲ့ဗမာသို့မဟုတ်ကရင် (တိုင်းရင်းသားအုပ်စု) ယဉ်ကျေးမှု၌တူမယ်လို့အဘယ်အရာကို။ ကျွန်မဘာမှမပြုမိသေးပေမယ့် ဒီနေရာမှာ ကျွန်မအမြူးအချို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဘီလူးသို့မဟုတ်ဒါခေါ် “Belu” ကျွန်မတို့တိုင်းပြည်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ထုံးတမ်းစဉ်လာများတွင် လူသိများသော အရုပ်ဆိုးသော ဒဏ္ဍာရီသတ္တဝါအပေါင်းတို့ကြောင့်ဒါဟာအမှန်တကယ်ပိုပြီး “လှယမင်းနဲ့ဘီလူး” နဲ့တူလှပါတယ်။
ဒီတော့အေ့ဟေ !! ယခုတွင်ကျွန်မသည်မကြာမီ အောင်မြင်မှု ရရန်ကြိုးစားနေပါတယ်။ ကျွန်မမဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာ အွန်လိုင်းမှာ ကျွန်မရဲ့အအနုပညာလက်ရာများရောင်းချနိုင်ပါလိမ့်မည်ကြောင်းမျှော်လင့်ပါတယ်။ ဤလှပသောလှုံ့ဆော်မှုအတွက် “Nayoung Wooh” ကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။
မကြာမီ တဖန် ပြန်ဆုံကြရအောင်နော်။
Need More Illustration Ideas?
As I really long to be an illustrator even if I end up doingadifferent job, I am now trying to come up with as much ideas as I can by looking at other people’s artwork.
So as I looked through many inspirations, I came across this Korean illustrator who goes by the name of “Nayoung Wooh”, better known as “Obsidian”.
She has created some of the most beautiful “Disney” inspired artwork which includes this “Beauty and the Beast” in the form of Korean culture. The way she culturally recreated one of the most beloved classical fairy tales is amazing. I really love her illustration style especially the textures and the warmth that come from the color. “Egyptian Papyrus” background behind her works make them appeared more three dimensional (3D), priceless and more likeacenturies-old painting thanamodern digital art.
Thus, I really got the idea and really wonder: what it would looked like in our Burmese or Kayin (ethnic group) culture. I haven’t done anything yet but here is some of my inspirations.
It actually looks more like “Beauty and the Ogre” because ogre or so-called “Belu” is the ugliest known mythical creature in our country’s culture and tradition. So, aha!! I am now fired up to take myself toawhole new level soon. I hope that I will be able to sell my artwork online in the near future. Many thanks to “Nayoung Wooh” for this beautiful inspiration!
Previous postMemories through the screens……
Next postDisney: The Art of Animation